Alaska WIC | JPMA, Inc.
eWIC waa kan Halkan!
Barnaamijkeena WIC wuxuu ka wareegayaa jeegaga wuxuuna u wareegayaa kaarka elektiroonigga ah ee wareejinta (EBT) ee aan ugu yeerno "eWIC." Kaarka cusub ee eWIC wuxuu umuuqdaa kaarka bangiga oo wuxuu kuyaalayaa dhammaan faa'iidooyinka qoyskaaga ee WIC hal meel.
Waa Degdeg - Waqti ayuu ku ilaaliyaa goobta wax lagu iibsado!
Waa Fududeyn - Iibso sida ugu yar ama ugu badan ee cuntadaada WIC ah markiiba!
Waa Sahal - Jeegag warqad dambe ma jiri doonaan!
Bixinta eWIC waxay noqon doontaa mid dhameystiran gobolka oo dhan dhamaadka Ogosto, 2019. Markaa hadaadan wali helin kaarkaaga, dhawaan waad heli doontaa!
La soco Video-ga eWIC
Fiidiyowga hoose wuxuu sharxi doonaa waxaad filan karto markaad hesho kaarkaaga eWIC iyo sida loo isticmaalo si loogu dukaameysto cunnooyinkaaga WIC.
Su'aalaha Isweydaarsiga eWIC
Sideen u hawlgaliyaa kaarkayga?
Xullo PIN adiga oo wacaya (844) 386-3149 ama aad khadka tooska ah internetka (aadna loo yaqaan ebtEDGE) ee ebtEDGE.com. Hayso taariikhda dhalashada qofka sita iyo lambarka boostada boostada ee guriga la heli karo si loo dejiyo PIN.
Shaqaalaha rugta caafimaadku adigaan kuu samayn karin. Nambarkaaga PIN waa mid shaqsiyeed iyo qarsoodi. Waad beddeli kartaa wakhti kasta.
Immisa kaararka eWIC ah ayuu qoysku yeelan karaa?
Midkiiba hal "guri" Si kastaba ha noqotee, haddii aad u adeeganeyso dhowr “guryo” (tusaale ahaan waxaad tahay waalid daryeele leh caruur badan oo WIC ah) waxaad ku adeeganeysaa kaarar badan.
Ka waran haddii kaarkayga uu lumo ama la xado?
Haddii aad aamminsan tahay inaad si ku meelgaar ah u lumisay kaarkaaga, waxaad wici kartaa rugta WIC ee deegaankaaga si lagaaga caawiyo. Weydiiso inaad “hayso” kaarkaaga.
Haddii la xaday ama xaqiiqdii kaa lumay waad iska noqon kartaa oo aad dib u isticmaali kartaa kaadh adoo wacaya (844) 386-3149 ama aad khadka tooska ah u aado xariirka (loo yaqaan ebtEDGE) ee wic.alaska.gov. Intaa waxaa sii dheer, waxaad u wici kartaa rugtaada caafimaad si aad u joojiso oo aad u codsato kaar cusub. Haddii tani ay tahay kaadhkaagii lumay ama kaa lumay ee koowaad ama kii labaad, wac rugtaada caafimaad si aad u hesho kaar cusub.
Haddii kaararka 3rd uu lumo / xado sanad gudihiis, waxaad u baahan doontaa inaad baajiso kaarka, oo aad dib udajiso mid cusub adiga oo wacaya (844) 386-3149, ama gasho khadka internetka ebtEDGE.com. Fadlan la soco in kaararka lagu dalbaday khadka adeegga macaamiisha ama khadka tooska ah ay qaadan karaan dhowr toddobaad inay kugu soo gaaraan, maadaama laga soo diray gobolka.
Sideen ku ogaanayaa waxaan iibsan karo?
Marka lagu siiyo kaadh xarunta waxaad heli doontaa daabacaad faa iidooyin ah iyo Liis cunto.
Markaad ka baxdo rugta caafimaadka waxaad uheli kartaa waxtarkaaga siyaabahan soosocda:
Adeegso muuqaalka "Faa'iidooyinkayga" WICShopper.
Dib u eegid ku daabacan faa iidooyinka faa'idooyinka cuntada ee xarunta.
Dukaanka waxaad ku weydiisan kartaa "baaritaan dheelitir" ama dib u eegid risiitkii kuugu dambeeyay.
U isticmaal xariirka bogga ebtEDGE.com si aad u aragto dheefaha reerkaaga ka haray.
Ka wac khadka adeegga macaamiisha at (844) 386-3149.
Kaarkeyga ma siin karaa saaxiib si uu ii dukaameysto?
Haa! Qofka la siinayo kaarka, oo loo aqoonsado inuu yahay kaarka koowaad, ayaa mas'uul ka ah kaarka. Yo Waad waydiin kartaa qof kale inuu kuu dukaameysto adoo siinaya kaarka, PIN iyo tilmaamaha sida loo isticmaalo iyo waxa la iibsanayo. La soco inaad adigu masuul ka tahay ficilladooda markii aad bixiso macluumaadkan. Gargaarka cuntada haddii la isticmaalo looma beddeli doono.
Bakhaarku ma wuxuu hubin doonaa saxeex ama aqoonsi?
Maya. Qofka wax iibsanaya wuxuu u baahan yahay oo keliya kaarka iyo PIN.
Xagee ka adeegan karaa eWIC?
Adeegso muuqaalka "WIC Stores" ee WICShopper ama wac rugtaada WIC ee deegaankaaga si aad wax uga weydiiso dukaamada WIC ee aagga ku yaal.
Miyaan wali ubaahanahay inaan aado xarunta caafimaadka si aan uhelo dheefaha?
Wac rugtaada caafimaad si aad u ogaato inaad u baahan tahay inaad soo gasho, ama haddii kaarkaaga iyo gargaaradaada meel fog laga soo saari karo. Waxaad wali ubaahantahay inaad u aado kiliniig si aad uhesho shahaadada, dhererka, culeyska, iyo shaqada dhiiga.
Haddii shay cunto ah oo aan u malaynayo inay tahay inuu ku bixiyo kaarkayga eWIC oo uusan ahayn, sidee ayaan macluumaadkaas ugu diraa WIC?
Isticmaal "Tani ma iibsan karto!”Ayaa lagu muujiyey WICShopper si loogu gudbiyo UPC iyo macluumaadka sheyga WIC!
Waxaad sidoo kale tagi kartaa websaydhka ah wic.alaska.gov Macluumaadka ku saabsan sida loo soo gudbiyo cuntooyinka si tixgelin leh.
Cunnooyinka waa la fiiriyaa, ama waa la aqbalayaa ama waa la diidaa 30 maalmood gudahooda soo gudbinta. Cunnooyinka dhowaan la ansixiyay waxaa laga heli doonaa Liiska Cuntada La Oggolaaday (APL), kaas oo ah kala-bixin aad u heer sareysa dhammaan cuntooyinka loo oggolaaday Alaska WIC.
Jeegaga iyadoo alaabada WIC ay ahayd in laga sooco oo loo maamulo macaamil ganacsi gaar ah, sidee eWIC u shaqeyn doontaa?
U ogeysii khasnajigaaga inaad adeegsan doonto WIC si ay kuu hagaan. Dukaammada qaar ayaa kuu oggolaanaya inaad wax walba isugu geyso macaamil ganacsi, laakiin way sahlan tahay in cuntooyinka WIC laga sooco kuwa kale. Had iyo jeer socodsiiya kaarkaaga eWIC KAARKA, marka hadhaaga haray ee cuntada waxaa loo aqoonsan karaa lacag bixin kale (sida SNAP, TANF, debit / credit, ama lacag caddaan ah). Hubso inaad fiiriso cuntooyinka 'lagu soo oogay' WIC kahor intaadan aqbalin macaamil xawilaadda.
Baadhitaanka alaabada ku jirta WICShopper
ALLOWED Alaabtaan waxaa loo oggol yahay Alaska WIC oo aad leedahay faa'iidooyinka WIC si aad u iibsato shaygan!
Liistada Alaaska WIC ee la ansixiyay